Muuri News Network » Xiisada Turkiga iyo Ruushka oo sii xoogeysaneysa & Vladimir Putin oo diiday inuu…
Xiisada Turkiga iyo Ruushka oo sii xoogeysaneysa & Vladimir Putin oo diiday inuu…
Dec 1, 2015 - Comments off
Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin oo ku sugan Magaalada Paris, ayaa iska diiday in uu kula kulmo Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan.
Madaxweynaha Turkiga, ayaa wuxuu Khamiistii sheegay in uu doonaayo in Magaalada Paris uu kula kulmo Madaxweynaha Ruushka, mudada uu ka soconaayo shirka looga hadlaayo wax ka qabashada cimilada caalamka.
Aqalka Kremlin-ka oo looga arrimiyo dalka Ruushka, ayaa sheegay inaanu jirin kulan la qorsheeyay in Madaxweynaha Ruushka uu Paris kula qaato dhigiisa dalka Turkiga.
Afhayeen u hadlay Kremin-ka oo lagu magacaabo Dmitry Peskov, ayaa Warbaahinta u sheegay inaanu jiri doonin kulan wada tashi, oo labada madax ay ku yeeshaan Caasimadda Faransiiska.
Xukuumadda Moscow, ayaa Xukuumadda Ankara ka sugeysa in raaligelin ka bixiso diyaaraddii Ruushka laga lahaa, ee 24-kii bishii November lagu soo riday xuduuda Turkiga iyo Suuriya.
Ra’iisal Wasaaraha Turkiga, Ahmet Davutoglu, ayaa Isniintii sheegay in wax laga xumaado ay tahay soo ridista diyaaradaasi, balse aanu Turkigu wax raaligelin ihi ka bixinayn.
Madaxweyne Erdogan, ayaa dhinaciisa sheegay haddii ay ogaan lahaayen in diyaaradaasi laga leeyahay dalka Ruushka, aanu Turkigu soo ridi lahayn, laakiin aanay Dowladiisu ka bixinayn wax raaligeln ah, tallaabada lagu soo riday, oo uu ku sheegay mid is difaacid ah.
Ruushka, ayaa cunaqabateen dhaqaale ku soo rogay dalkaasi Turkiga, waxa kaloo uu diiday in waxyaabaha lagu sameeyo Turkiga loo iib keeno Ruushka, sidoo kalana la xadidi doono qandaraalayaasha Turkiga ee hawlaha shaqo u joogga Ruushka. Ruushka waxaa uu ku hanjabay in ay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo ka dhan ah Turkiga.